ငါနောက်ပိုင်းတွင်တစ်လဘယ်လိုစတင်ရန်သလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စတုတ္ထ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤနည်းလမ်းကိုနေ့ကလစဉ်ရှိတက်ဘလက်ပုံစံကိုသူတို့အတူတူပင်နေ့၌တစ်ဗူးနှင့်ဧည့်ခံထဲမှာများသောအားဖြင့် 21 အပိုင်းအစဖြစ်ကြသည် 21 အပိုင်းပိုင်းအပြီးတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုလစဉ်စတင်ဖို့ contraceptives, ဒါကြောင့်သင်သံသရာ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ကမှသူတို့ကိုမသောက်ရလျှင်, တတိယ ရက်အနည်းငယ်ရွှေ့ဆိုင်း။
ဒါဟာလိုအပ်အလွဲသုံးစားမသည် သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းတိုင်းလမ်းကြိုးစားခဲ့ကအလုပ်လုပ်တယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
တစ်ခါတုန်းကပင်လယ် သွား. , ဒါ Quote ပျော်မွေ့ချင်ခဲ့တယ်; napolnuyuquot;, သူတို့မရှိဘဲအရက်မူးသောဤအစီအစဉ်ကိုအောက်မှာ။ 21 တက်ဘလက်၏မွေးစားမှတ်တိုင်အဖြစ်နောက်တစ်ကြိမ်အနည်းငယ်အပိုင်းပိုင်းသောက် Quote သွားကြဖို့ start ပြီးနောက်ဒါဟာအစဖြစ်နိုင်; delaquot; ။
Самое лучшее средство для этого — оральные контрацептивы. Но пить их нужно начинать заранее, с самого начала цикла. А чтобы не начались месячные, нужно просто не делать перерыв между пачками, а сразу начинать следующую.
တစ်လနှောင့်နှေး, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုလုပ် ကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာစတင်, конечно же, можно, но это получится не сразу. И не самое это хорошее дело — вмешиваться в уже сложившуюся периодичность циклов,
သငျသညျထိုသို့ပြုမှဆုံးဖြတ်သူတို့ကိုအနည်းငယ်အကြာတွင်ပုံမှန်အချိန်ကိုက်ထက်စတင်ခဲ့ပါပြီချင်ဘူးဆိုရင် (ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းများ, သင်တားဆေးမသောက်ရနျလိုအပျပါက), ဒီသောက်ဘို့ / ပါးစပ် contraceptives ကိုအသုံးပြုပါ။
ရာသီရဲ့အစမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအမျိုးသမီး contraceptives ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်တို့မူကား ယူ. ချက်ချင်းဧည့်ခံရဲ့ start ပြီးနောက်ရာသီစက်ဝန်း၏အစနှောင့်နှေးလို့မရပါဘူး။ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှုစတင်ပြီးနောက် 1-3 လအကြာတတ်နိုင်သမျှလစဉ်သုံးပြီး contraceptives ထိန်းညှိ။
COCs ယူပြီးလျှင်, ချက်ချင်း 1 သံသရာမှဝန်ခံချက်ပြီးနောက်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစံသောက်သုံးစတင်ပါ။ သငျသညျလကျမခံပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာသံသရာ၏ထက်ဝက်ထက်ပိုမယူပါကလည်းဖြစ်ပေါ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့-ရာသီကိုစတင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သံသရာ၏ထက်ဝက်ထက်ပိုခဲ့လျှင်, အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျတစ်နေရာလာမည့်ခရီးစဉ်ကြောင့်ဥပမာရာသီ၏ဆိုက်ရောက်, နှောင့်နှေးချင်လျှင်, သင်က hemostatic မြက် -on, burnet လို့ခေါ်တဲ့မြက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအတွက်နေ့ကပြုလုပ်သောက်သုံးခြင်း Start နှင့်ဆိုက်ရောက် Quote ၏ထိုအချိန်က; gosteyquot; ရပ်တန့်ယန္တရားပြီးသားအပြေးလိမ့်မည်။ အဖြစ်မကြာမီရပ်တန့်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောပြန်၏။
ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကိုသိုးထိန်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ဦး decoction သောက်ရရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ငါ့လူငယ်အတွက်သတိရပါ။ အဆိုပါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကောင်းသောခဲ့ကြသည်။
ဆရာဝန်များရုံလေ့ကျင့်ရေးကိုရပ်တန့်ကြပါဘူး, ဒီ contraceptives အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဟုဆိုသည်။
မှန်ပါသည်, လစဉ်လုပ်နိုင်စွမ်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်အကြာတွင်ရောက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်မှန်မှန်နှင့်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်, ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြီးစွာသောအပြစ်ပြုအဖြစ်ထိုသို့ပြုမှနားလည်ရပေမည်။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကာလလာရန်ခန့်အတွက်ချိုးအောင်မပါဘဲဆေးလုံးသောက်ရရန်လိုအပ်သည်။
Месячные можно задержать на6—7дней, если за5дней до начало менструации начать пить противозачаточные таблетки. Пить их можно в течении7дней, не больше, так как месячные вс-таки должны пойти и они начнутся через2дня после прекращения прима таблеток.
သငျသညျပြီးသားထိုကဲ့သို့သောတက်ဘလက် Pte နေတယ်ဆိုရင်, ဒါဟာ 21 ရက်ပေါင်း (1 တက်ဘလက်များ) ထက်ပိုမိုသစ်တစ်ခုအထုပ်နှင့်အတူ 7-ကြိမ်မြောက်တက်ဘလက်သောက်သုံး start, ဒါပေမယ့်မချက်ချင်းလာမယ့်နေ့ကဒုတိယ-7 တက်ဘလက်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လုပ်နေတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့်အလွန်ခဲနှင့်သာရှိရာ Quote ရှိသူများကိစ္စများတွင်; ကောင်းစွာ nadoquot; ။ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသဘာဝကိုမပြုလုပ် 28 ရက်နှင့်သူတွေဟာကြောင့်တိုးမြှင့်ကြောင့်သံသရာ, တိုးပွါးသောအခါမဖြစ်သင့်ပါတယ်။
priyome ပါးစပ် contraceptives တစ်ချိုးစေခြင်းငှါမပါလျှင်ရာသီ, နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းကိုသာအစွန်းရောက်ဖြစ်ပွားမှု၌၎င်း, စော်ကားခြင်းကိုမဆိုအမှုများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံထိုအအားကစားသမားဖြစ်ကြသည်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,356 စက္ကန့်ကျော် Generate ။